स्वास्थ्यका सूचाङ्कमा सुधार देखिएन, के हो कारण ? | Rajmarga
स्वास्थ्यका सूचाङ्कमा सुधार देखिएन, के हो कारण ?
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । स्वास्थ्य क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७४/७५ मा छ दशमलव तीन रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ मा उल्लेख छ ।
अधिल्लो आवमा जस्तै यस आवमा पनि कूल प्रजनन (प्रति महिला) दुई दशमलव तीन, परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता ५३ प्रतिशत, नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २८ दिनभित्र २१ रहेको छ । यसैगरी शिशु मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा एक वर्षभित्र २६ ,पाँच वर्षमुनिका मृत्युदर प्रति एक लाखमा ३९, गर्भवतीले कम्तिमा चारपटक जाँच गराउने महिलाको प्रतिशत ६९, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने गर्भवतीको ५८ रहेको छ ।
एकर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चारवटा मात्र स्वास्थ्य संस्था निर्माण बनाएको सर्वेक्षणमा रहेको छ । अघिल्लो आव २०७४÷७५ मा चार हजार ५१३ रहेका थिए । अहिले यो वृद्धि भएर चार हजार ५१७ रहेका छन् । एक वर्षभित्रको अवधिमा अस्पताल शै्यामा थप भएन । विगत वर्षमा आठ हजार १७२ शै्या रहेका थिए ।
Previous post: गरिबीका कारण श्रीमानले आत्महत्या गरेपछि श्रीमतीसहित पाँच छोराछोरीको बिचल्ली
Next post: बुढिगण्डकी आयोजना अघि नबढाएको भन्दै सत्तारुढ सांसदद्वारा सरकारको आलोचना